ကိုရီးယားအစားအစာစစ်စစ်တွေကို အရသာခံနိုင်ဖို့ ကိုရီးယားထိသွားစရာမလိုပါဘူး – FoodiesNavi
ကိုရီးယားအစားအစာစစ်စစ်တွေကို အရသာခံနိုင်ဖို့ ကိုရီးယားထိသွားစရာမလိုပါဘူး
By yin sandi On June 6, 2018 0
Facebook မှာတအားဟော့ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားကဝဝကစ်ကစ်အစားသရဲမလေး Yang Soobin ကိုသိကြတယ်ဟုတ် အက်မင်ကတော့ သူစားစားပြနေတဲ့ ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲတွေကို ကြည့်ရင်းသွားရည်ယိုရတာအမော ? ဒီလိုမျိုး ကြည့်လေစားချင်လာလေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကို မထိန်းချုပ်တဲ့အဆုံး ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲအရသာအတိုင်း တစ်ပုံစံတည်းရနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီ ? အက်မင်နဲ့ဘဝတူ အစားတစ်လိုင်းတို့လည်း စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်ထင်လို့ ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲကောင်းကောင်းလေးရနိုင်မယ့် Yoogane ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်နော် ?
Yoogane မှာတော့ Spicy Shin Remyeon ၊ Chees Dokgu Remyeon ၊ ရာသီဥတုပူပူအိုက်အိုက်နဲ့ဆို တကယ်လိုက်ဖက်မယ့်ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲအေးစတဲ့ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲမျိုးစုံရနိုင်တဲ့အပြင် ပဲကြာဆံအိအိလေးကို ကြက်သားအချိုနဲ့တွဲဖက်ချက်ထားတာကြောင့် အစပ်မစားနိုင်တဲ့လူတွေအတွက် တကယ်စားလို့ကောင်းမယ့် ဂျပ်ချဲ ၊ ရေဘဝဲအကောင်လိုက်ကြီးကို ငရုတ်သီးဆော့စ် ၊ ကြက်သား ၊ အရွက်အသီးအစုံနဲ့ ရောချက်ပေးထားတဲ့ ရေဘဝဲကြက်သားဂါးလ်ဘိ၊ ကြက်သားအချိုအစပ်နဲ့ပင်လယ်စာတွေနဲ့ ရနိုင်ပြီး Cheese လေးတွေပါရောပြွမ်းပြီးစားရတာကြောင့် အရသာထူးခြားချက်က9ကျော်နေတဲ့ Cheese ထမင်းကြော် ၊ အဆာပြေအနေနဲ့ပဲစားစား သွားရည်စာအနေနဲ့ပဲစားစား အိအိဖတ်ဖတ်လေးနဲ့တကယ်ခံတွင်းတွေ့စေတဲ့ Fish Cake မျိုးစုံ ၊ တော့ပိုကီဆိုရင်လည်း ရိုးရိုးတော့ပိုကီ ၊ ချိစ်တော့ပိုကီ ၊ ကန်စွန်းဥတော့ပိုကီဆိုပြီး သုံးမျိုးတောင်ရတယ်ရယ် ?
အရသာကလည်း ကိုရီးယားမှာသွားစားနေရသလိုမျိုး ကိုရီးယားလက်ရာတွေအတိုင်း ခံစားရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ရော စားသောက်ဖွယ်ရာပြင်ဆင်မှုတွေပါ ဆန်းဆန်းသစ်သစ်လေးပြင်ပေးထားတော့ ဆိုင်လေးတွေကထိုင်ချင်စရာလေးတွေရယ် ? Yoogane က Junction Mawtin မှာရော Myanmar Plaza မှာပါဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့် အစားတစ်လိုင်းတို့နဲ့အနီးဆုံးဆိုင်လေးကို ဒိုးလိုက်တော့နော် ?? ??
Image Source : www.facebook.com/yoogane
(၁)ပွဲကို(၁)ထောင်ကျပ်သာပေးရပြီး ရှယ်မုန့်တီအရသာခံစားနိုင်မယ့် ရွှေသိရွှေဘိုမုန့်တီဆိုင်